Happy Blog Day!!! – Hsu Myat Moe
Blog ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ကျွန်မရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ connection ကောင်းတဲ့အရပ်မှာနေသူမို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုစ့်တင်ဖို့ကူရင်းကနေ ကိုယ်ပိုင် blog လေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ၂၀၀၉ တုန်းက ကျွန်မအသက်က ၂၁ နှစ်သာသာကလေးရယ်မို့ ကျွန်မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေက အချစ်အကြောင်း ၊ အလွမ်းအဆွေးတွေအကြောင်း ၊ ရောက်တတ်ရာရာလေးတွေပါပဲ ။ အလယ်တန်းအရွယ်လောက်ကနေ စာရေးခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သူမို့ ကျွန်မကတော့ အကြောင်းအရာမယ်မယ်ရရမရှိပေမယ့် blog ပေါ်မှာစာတွေရေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ စာသာရေးနေပေမယ့် စာဖတ်သူဆိုလို့ တစ်လနေလို့တစ်ယောက်တောင်မရှိခဲ့တဲ့ကျွန်မဘလော့လေးကို စာဖတ်သူတွေရောက်လာအောင်ဆွဲခေါ်ပေးခဲ့သူက မမကွန်။ မမကွန်ရဲ့ blog list ကနေတဆင့် ရောက်လာကြတဲ့ ကိုဇတ်တီ ၊ စင်စင် ၊ တီသက်ဝေ ၊ တီချစ်ကြည်အပါအ၀င် တခြားဘလော့ဂါတွေရဲ့ cbox က စကားသံတွေ၊ comment တွေပေးတဲ့အားနဲ့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်မဘလော့လေးအသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတစ်ယောက်မှမရှိတဲ့အချိန်ကနေ စာဖတ်သူတွေတစ်စထက်တစ်စပိုလာတော့ ကျွန်မပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း ။ ဒါပေမယ့်လည်းfacebook ခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ဘလော့လောကကြီးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ် ။ ကျွန်မကတော့ facebook ထက် blog မှာစာရေးရတာပိုခုံမင်သူမို့ ဘလော့ကလေးမှာစာတွေရေးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ အရိုးသားဆုံးဝန်ခံရရင် ကျွန်မစာရေးခြင်းဟာ ရေးချင်စိတ်တစ်ခုတည်းကြောင့်သာရေးနေတာမို့ စာဖတ်သူမရှိလည်း ကျွန်မစိတ်မပျက်ခဲ့ပါဘူး ။ ပုံမှန်လာဖတ်နေတဲ့သူတွေဟာ ကော့မက်မချန်ပေမယ့် ခြေရာလေးတွေကို blog status ထဲမှာကြည့်လို့ရတာမို့ တစ်နေ့ ဆယ်ယောက်တောင်မပြည့်ပေမယ့် စာဖတ်သူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အသိကလေးနဲ့ကျွန်မကျေနပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘလော့ရေးသက်လေးအတော်အသင့်ရလာတဲ့အခါ responsiblity ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုစတင်ခံစားမိပါတယ် ။ ကျွန်မဟာ မချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) တို့လိုဗဟုသုတကြွယ်ဝတဲ့သူလည်းမဟုတ် ၊ ကိုနဗန ၊ ကိုဇတ်တီ တို့လို့ ဘ၀အတွေ့အကြုံစုံတဲ့လူလည်းမဟုတ်၊ ကိုလူပျိုကြီး ၊ ကိုကိုဒီဘီ တို့လို sharing လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူလည်းမဟုတ် ၊ မနိုင်းနိုင်းစနေတို့လို စာကောင်းပေကောင်းရေးနိုင်တဲ့သူလည်းမဟုတ် ၊ တီသက်၊ တီချစ်ကြည် ၊ မဒမ်ကိုး ၊ မတန်ခူး (လေနုအေး) တို့လို ဘက်စုံရေးနိုင်တဲ့သူလည်းမဟုတ် ။ ဒီတော့ ကျွန်မစာဖတ်သူတွေကို ဘာပေးနိုင်သလဲလို့စဉ်းစားတော့ ကျွန်မပေးနိုင်တာဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် မပေးနိုင်ရင်တောင်မှ ကျွန်မစာဖတ်သူတွေကို အတွေးမှားမပေးဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့အတူ ကျွန်မရဲ့နဂိုရွဲ့တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအခြေခံတဲ့စာတွေအစား အနှစ်တစ်ခုခုကျန်အောင်ရေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနှစ်ပိုင်းထဲမှာ ဘလော့ဂါတွေတော်တော်များများကို print media ထဲမှာတွေ့လာရတော့ ဂုဏ်ယူအားကျစိတ်နဲ့အတူ ကျွန်မလည်းဝတ္တု ၊ ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုစတင်ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ စိတ်ကူးထဲမှာဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိနေပေမယ့် ချမရေးဖြစ်ခဲ့တာမို့ နောက်ပိုင်းမှာအတိုးချပြီး ၀တ္တုတိုကလေးတွေရေးရင်းကနေ ကျွန်မအရင်တုန်းကရေးခဲ့တဲ့ မနူးမနပ်စာကလေးတွေအစား ဘလော့မှာစာသန့်လေးတွေပဲထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ blog အဟောင်းလေးကိုဖျက်လိုက်ပါတယ်။ blog အသစ်ကလေးတစ်ခုလုပ်ပြီး အဟောင်းထဲကကောင်းနိုးရာရာလေးတွေတင် ၊ ၀တ္တုတိုလေးတွေရေးနေတာ ဒီနေ့အထိပါပဲ ။ ဘလော့လေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘလော့ဂါအကိုအမတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဘလော့ဂါရပ်ဝန်းကိုသံယောဇဉ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ ကျွန်မမသိပေမယ့် ၂၀၀၉ တည်းကနေ ဒီနေ့အထိ တစ်ရက်မှ ဘလော့အလည်မပျက်ခဲ့ပါဘူး ။ အသက်လေးတွေကြီးလာတာနဲ့အမျှ တာဝန်တွေပိလာတာကြောင့်စာတွေအရေးကျဲလာခဲ့ပေမယ့် ဘလော့အပေါ်ထားတဲ့သံယောဇဉ်ကတော့ ကြိုးတင်းတင်းနဲ့ကျွန်မကိုတုပ်နှောင်ထားတုန်းပါပဲ ။ blog လေးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်မစာလေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေရှိလာတယ် ၊ ကျွန်မချစ်ခင်လေးစားရတဲ့အကိုအမတွေနဲ့တွေ့လာရတယ် ၊ ကျွန်မကိုသိတဲ့သူတွေရှိလာတယ် ၊ ကျွန်မနာမည်ကို print media တချို့မှာမြင်ခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ် ။ အမှတ်တရအနေနဲ့ မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ blogger ကြီးစု (စုချစ်သူ) ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ဆရာမင်းလူမကွယ်လွန်ခင် မြန်မာကျူးပစ်မိသားစုဝင်တွေစုစည်းပြီးအလှူတစ်ခုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မ blog မှာရေးထားတာကိုနှစ်သက်တဲ့အယ်ဒီတာအမတစ်ယောက်က blog က စာမူလေးတွေကို ဂျာနယ်မှာဖော်ပြပြီးတိုင်းမှာ စာမူခလေးတွေကိုတခုတ်တရသိမ်းထားပေးတာမို့ ထိုစာမူခတွေကိုစုပြီး ဆရာမင်းလူအတွက်အလှူထည့်ဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဘလော့ကပေးတဲ့စာမူခတွေကို ကိုယ်လေးစားရတဲ့ဆရာ့ဆေးကုသစရိတ်ပါဝင်နိုင်ခဲ့တာမို့ ဂုဏ်ယူစိတ်နဲ့အတူ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လှူလိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းမိပြန်ပါတယ် ။ blog နဲ့ပက်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ ၊ ဘလော့လေးကိုသံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ ၊ ဘလော့ဂါရပ်ဝန်းကအကိုအမတွေကိုလေးစားအားကျတဲ့ ကျွန်မကတော့ ဘလော့ဂါဖြစ်ရတာကို အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူနေမှာပါ ။
ချစ်ခင်ရတဲ့အကို ၊ အမ ၊ မောင်လေး ၊ ညီမလေးတွေလည်း blog day အမှတ်တရလေးတွေရေးပေးပါဦးနော် ။
Filed Under: tag, အမှတ်တရများ
18 thoughts on “Happy Blog Day!!!”
ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသော ဘလော့ဒေးမှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် အားပါးတရ ဘလော့ဂင်းကြပါစို့ရဲ့…
ညီမ ဘလော့ဂ်ကို အစ်မ မရောက်ဖူးသေးတာထင်တယ်
ဘလော့ဂ်ဒေးအမှတ်တရ ဖြတ်သန်းမှုလေးလည်း ဖတ်သွားတယ်
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ 🙂
ဘယ်သူမဆို တစ်နေ့ ကျရင် ကိုယ့်ရဲ့ စာရေးပုံပာန် နဲ့ စတိုင်လ်ကို တဖြေးဖြေး အများနှင့်မတူဘဲ တစ်မူထူးခြားစွာ ပုံမှန် စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ လေ့ကျင့်ရင် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်
ရေးဖြစ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မဆုမြတ်မိုးရေ. ဒီပို့စ်လေးကို Blog Digest Fan Page လေးမှာ Share ပေးလိုက်ပါတယ်..
Happy Blog Day NyiMa Hsu Myat !
and Happy Life for you
Happy Blog Day sis…
Happy Blog Day ပါ ရှင်…………. နောက်နှစ်တွေလည်း အတူတူဒေး ကြရအောင်နော် ..:)))
ဆုမြတ်ရေ happy blog day ပါ ။ အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ စာရေးတဲ့သူ ဖြစ်ပါစေလို့ မလေး ဆုတောင်းပေးတယ်နော် 🙂
ကိုရန် ဖဘမှာ ရှယ်ထားတဲ့ လင်ခ်လေးကနေဆစ်ဆင့် ကိုဏီ ရောက်ခဲ့တယ် ညီမလေး။
၀ါသနာပါတဲ့ စာတွေအများကြီး ရေးသွားနိုင်ပါစေဗျာ..
စာတွေ ချစ်တဲ့ ညီမလေး စာတွေ ဆက်ရေးသွားပါ.. အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ…
နေမကောင်းပေမဲ့ အားတင်းပြီး စာလာဖတ်ဖြစ်တယ် ညီမလေး။
My dear Su..
With my laptop i can’t read u r blog.
Only with samsung note i can read.
But cannot write in burmese,that why
I don’t have chance to leave comment.
I love you and your blog too 🙂
အစ်မထက် နောက်ကျတယ်.. ခုမှ ပြီးတာ..ဟိဟိ
အသူရယ်..ဟုတ်ပ နောက်တောင်ကျနေပြီနော်..း)
ဦးဟန်ကြည်- ဟီးးးးဟုတ်..အိတ်နဲ့လွယ်ခွင့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင် ။ happy blog day ပါနော်
မသူ- ဟုတ် မသူပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေရှင်..။ လင့်လေးယူသွားတာကျေးဇူးပါမ ။
၀ိဝိ – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါနော်ဝိ၀ိ
ကိုရန်အောင် – ဘလော့လေးလာလည်တဲ့အတွက်ေ၇ာ လင့်လေးရှဲပေးတဲ့အတွက်ပါကျေးဇူးပါနော် ။
မဖြိုး – လာလည်တဲ့အတွက်ကော ဆုတောင်းလေးတွေအတွက်ပါကျေးဇူးပါမဖြိုးရှင့်
မနှင်း – ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေမနှင်းရယ်…း) လင့်ချိတ်ပေးတာကျေးဇူးပါနော်။
မလေး… ကျေးဇူးပါချစ်သောမလေးရယ် <3 ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေရှင့်
ကိုဏီ- ပေးတဲ့ဆုနဲ့တလုံးတ၀တည်းပြည့်ခွင့်ရချင်ပါတယ်ကိုဏီ။ လာလည်တာကျေးဇူးပါနော်
အမ်တီအမ် – အမြဲလာလည်တဲ့အတွက်ရော ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်
လရိပ်- နေမကောင်းတဲ့ကြားကလာလည်တဲ့အတွက်ရော စာလာဖတ်တဲ့အတွက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..။ take care 🙁
မမီး- မြန်မာစာတွေမမြင်ရပေမယ့်လာဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်မမီးရယ်..း) i love u too <3
မိုးသက်- လာလည်တာကျေးဇူးပါမိုးသက်ရယ်..ဟုတ်ပ သူနောက်အကျဆုံးပဲ ။
လာလည်တဲ့သူတွေရော ကော့မက်ပေးသွားကြတဲ့ချစ်သောအကိုအမ မောင်လေးညီမလေးတွေကို ကျေးဇူးတင်လျက်
အရမ်းနောက်ကျနေပြီနော်၊ 🙂 (အမ လာခဲ့တာပြောတာပါ) အမ Blog က ဟက်ကာဆိုတာ ပို့စ်ကနေတဆင့် ညီမ blog လေးကို ရောက်ရှိခဲ့တာပါ၊ ရိုးရှင်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့ ဘလော့ဒေးကိုရေးထားတာ သဘောကျမိပါတယ် ညီမငယ် 🙂
Hsu Myat ကို စာဖတ်သူ ဘလော့မရေးဘူးထင်နေတာ… ဆုမြတ်ဘလော့လေး ဒီနေ့မှရောက်ဖြစ်တယ်… Happy Blog Day နော်… ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာပိုစ့်က နောက်ဆုံးပဲ… ဆက်မရေးတော့ဘူးလား…ရေးပါ… ဘလော့လေးက ဖေ့ဘွတ်ထက် ပိုကောင်းပါတယ်..
ကျေးဇူးပါ မမထရီဇာနဲ့ မဗေဒါး)
ဟုတ် ခုပြန်ရေးနေပါတယ်နော် ။